Universal Bluetooth Long Tripod ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ပြီးကိုယ်တိုင် Timer ဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ။ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
အဝေးထိန်းနှင့် Self-Timer ပါ ၀ င်သည့်ဘလူးတုသ်ရှည်လျားသော tripod
$20.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $26.99
ယူနီဗာဆယ်ကြာမြင့်သောသုံးလိုင်းပါသောဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုနှင့် Self-Timer - Russian Federation backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tripod
သုံးပါ: လှုပ်ရှားမှုကင်မရာများ, Point & Shoot ကင်မရာများ360 °ဗွီဒီယိုကင်မရာအတွက်စမတ်ဖုန်း &ဗွီဒီယိုကင်မရာ၊Mirrorless System Camera,DSLRအထူးကင်မရာ၊ဒီဂျစ်တယ် Cine ကင်မရာများ
ခေါက်ရှည် (မီလီမီတာ): 350mm
မက်စ်တိုးချဲ့တာရှည်သော (မီလီမီတာ): 1000mm
အလေးချိန် (ဆ): 380g
အသုံးပြု: ကင်မရာ Phone Holder
အမျိုးအစား: ရှည်လျားသော tripod Bluetooth Remote Self-Timer, ရှပ်တာကလစ် ကိုင်ဆောင်သူ Phone မတ်တပ်ရပ်
အိတ်ဆောင်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ပြင်ပ, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် timer နေရာမှာအညွန့်များအတွက်စံပြ
သင်၏ tripod ကိုအပြည့်အဝမြှင့်တင်ပေးထားသည့် built-in bubble level
360 °အလျားလိုက်နှင့် 90 °ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်
tripod အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် -
ပစ္စည်း - ဖုန်းတောင်ပေါ်မှာရပ်ထား
min အမြင့်: 35cm
မက်စ် ပြွန်အချင်း: 16.8mm
ဖုန်းကိုင်သူ Adjustable အကျယ်: 52-85mm
အမြင့်ဆုံး tripod ဝန်: 3kg
ဝက်အူအရွယ်အစား: 1/4 ''
iOS (၅.၀ အထက်အထက်) / Android စနစ်အတွက် (Samsung / MOTO / Google / Xiaomi / Sony / HTC စသည်တို့အတွက်၊ Android 5.0 အထက်) အတွက် Android စနစ်အတွက်လျှောက်ထားပါ။
LG အတွက် Optimus G2 G3 G4 HTC အတွက် M7 M8 အတွက် Sony အတွက်
iPhone44s အတွက် iPhone55c 5s iPhone66 အပေါင်း 6s 6s plus အတွက်
Samsung Galaxy s3 s4 s5 s6 note4note3note2ဖုန်းအားလုံးအတွက်
Samsung Galaxy Note2အတွက် n7100 မှတ်စု3n9000 note4n9100 note5N9200 အတွက်
Samsung Galaxy A3 A3000 A5 A5000 A7 A7000 A8 A8000 အတွက်
Samsung Galaxy s3 mini i8190 s4 mini i9190 s5 mini G800 အတွက်
Samsung Galaxy Alpha G850 မွ3neo n7505 Grand2Duos G7106 အတွက်
Samsung Galaxy s2 i9100 Ace3s7272 s5830 အတွက်
Xiaomi အတွက် mi3 mi4 mi5 Redmi အတွက် Meizu 12လိုလားသူ ၅ m2 မှတ်စု m3 မှတ်စုအတွက်
Bluetooth အဝေးထိန်းညွှန်ကြားချက်များ -
ပါဝါဖွင့်ပြီးလျှင် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှု key ကိုနှေးပါ။ ဘလူးတုသ်သည်ရှာဖွေ။ လိုက်ဖက်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့သွားသည်
ကိုက်ညီရန်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုသုံးပါ။ တွဲဖက်မှု၏အောင်မြင်မှုပြီးနောက် LED မီးထွက်လိမ့်မည်
သက်ဆိုင်ရာ configuration key ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ပါ။ configuration ကိုပြီးနောက် LED မီးထွန်းလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းကိုဤအချိန်တွင်ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါးမိနစ်အသုံးမပြုဘဲကုန်ပစ္စည်းသည်အလိုအလျောက်မြုံနေသောအခြေအနေသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ အသုံးမ ၀ င်သောအချိန်တွင် Battery ကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းကိုပီစီပစ္စည်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပါဝါ adapter ဖြင့်အားသွင်းနိုင်ပါတယ် --- အပေါ်အားသွင်း LED ။ ထွက် LED - ရွှဲ။
tripod ၁ ခု
1 x ကို ဦး - ကလစ်
1 x ကိုသိုလှောင်အိတ်
1 x ဘလူးတုသ်ဝေးလံခေါင်ဖျား
всепришловцелости оченьдовольна။ спасибопродавцу!
Штативпришёлвцелости! လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု (မကြာမီကပြန်လည်မှတ်ချက်ပေးရန်အကြောင်းကြားစာပေါ်လာသည်) အနေဖြင့်ရောင်းသူအားသူ၏အဖြေကို“ အဝေးမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ရောက်ရှိလာပါကကောင်းမွန်သောအရာများမဟုတ်ကြောင်း”) ကိုအစပြုခဲ့သည်။
ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအချိန်မီအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေ5***** သို့စတိုးဆိုင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်